MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EYGA ADHIJIRKA AH EE ANATOLIA - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eyga Adhijirka ah ee Anatolia
Lab Anatolian Woodyacres Cenk Koda aka aka Koda oo jira 18 bilood— 'Koda wuxuu ahaa shaqooyin badan oo arday ahaan ah, is dhexgal bulsho oo adag, anshax adag laakiin kalgacal leh, iyo waqti aad u badan oo maalgashi lagu bixiyay. Laakiin waxay u qalantay daqiiqad kasta. Koda waa wehel layaableh. Wuxuu ka gudbay dhalashadiisa wanaagsan ee Canine wuxuuna hada u tababarayaa shahaadada eyga daweynta da'da yar ee 18 bilood. Isagana wuu iga qosliyaa maalin kasta. '
Liistada Eyda adhijirka ah ee loo yaqaan 'Mix Shepherd Mix breeds Dogs'
Isku day Kopegi
Eyga Adhijirka ah ee reer Anatolia
Eyga Adhijirka ah ee loo yaqaan 'Anatolian Shepherd Dog' waa ilaaliye weyn oo xayawaanno ah, roog ah oo xoog badan. Wuxuu aad ugu egyahay kan Pyrenees weyn iyo Pooch , laakiin waa khafiifsan yahay uguna dhaqsi badan. Madaxa ayaa si fiican ula jaanqaadi kara jirka intiisa kale, weyn oo xoogan, xoogaa wareegsan, oo xoogaa joogsanaya. Afka muusiggu badanaa waa madow oo qaab afar gees ah ayuu u eg yahay. Dibnaha ayaa madow oo waxoogaa hoos u dhigaa dharabku waa inuusan badnaan. Dibnaha sare waa inuusan hoos uga gaabin daanka hoose daarkiisa hoose. Ilkaha waa inay ku kulmaan qaniinyada maqaska, laakiin qaniinyada heer waa la aqbali karaa iyadoo loo eegayo heerka qoran. Saddex xagalka, dhegaha dhegta waa in aan la dhigin oo aan ka sarreyn diyaaradda madaxa. Waa inay ahaadaan qaab V ah oo leh cirbad wareegsan oo badiyaa madow. Turkiga dhexdiisa, dhagaha ayaa badanaa la goostaa oo aad u gaaban. Indhuhu waa dhex dhexaad, kala gaar ah, yicib u eg iyo midab madow oo midab leh. Cirifka indhaha waa ku madow yihiin eeyaha oo dhan marka laga reebo kuwa midabka beerka, halkaasoo ay yihiin bunni oo leh sanka bunni ah. Qoorta waa cufan tahay, xoogaa qaloocsan, xoog badan, muruq leh, oo leh dharab yar. Jadwalka kore wuxuu u muuqan doonaa heer markii eey dhaqdhaqaaqeyso oo xoogaa lagu wareejin doono sinta. Laabta ayaa qoto dheer waxayna gaadhaa xusullada. Dhabarku waa awood, muruq iyo heer gaaban marka loo eego dhererka lugta. Lugaha hore waa inay si habsami leh u fidiyaan iyadoon la garaacin wax garaacaya oo toosan oo si fiican loo kala saaray. Dabada ayaa la dhigay halkii sare. Waa inuu ahaado mid dheer oo gaadhaya hocks. Markii la dabciyo, waxaa lagu qaadaa hoos iyadoo dhamaadka kor loo laalaabayo. Markaad feejignaato, dabada ayaa kor loo qaadayaa, iyadoo laga dhigayo 'giraangir'. Gawaarida hoose iyo giraangiraha labadaba waa la aqbali karaa markaad gaartid. Gawaarida 'giraanta' ayaa laga door bidaa giraanta showga. Dabada daruuri maahan inay gebi ahaanba goyso. Koodhka laba-gaaban ama midka gaaban ayaa guud ahaan lagu dhajiyaa maaskaro madow, in kasta oo qaababka midabbada iyo calaamaduhu u siman yihiin la aqbali karo oo ay ka mid yihiin pinto, white and brindle. Koodhku wuu ka dheer yahay qoorta iyo dabada. Dhererka wuu kala duwanaan doonaa iyadoo ku xiran nasashada eeyga iyo xilli. Waxaa jira laba nooc oo jaakad aasaasi ah: dherer dhexdhexaad ah iyo dhexdhexaad dheer.
Adhijirka reer Anatoliyadu waa ilaaliye adhi leh aragti iyo maqal sare. Maaha eey dhaqda. Waa mid aad u daacad ah, feejigan oo awood u leh xawaare iyo adkaysi weyn. Waa caqli, feejignaan iyo fududahay in la tababaro, laakiin maahan eey bilowga ah. Waxay u baahan tahay ilaaliye kaas si dabiici ah u iftiimaya hoggaaminta . Madaxbanaan, dagan, aan leexleexad lahayn oo geesi ah, laakiin aan dagaal ku jirin, waxay u muuqdaan kuwo cabaada habeenkii oo haddii ay guryo kula wadaagaan, waxaad u baahan tahay inaad saxdo habdhaqankan haddii aan la rabin. Maaddaama Adhijirka reer Anatoliya uu yahay ilaaliye adhi dhashay wuxuu noqon doonaa mid aad u feejigan oo hanti yeelan kara haddii aan lagu hayn booskiisa saxda ah ee ka hooseeya aadanaha. Haddii ay is aragto inay ka sarreyso qoyska waxay ku dhaqmi kartaa kalgacal iyaga laakin laakiin shaki badan ayey ka qabaan shisheeyaha illaa heer ay dhib ku tahay. Tani waa arrin si gaar ah u walwal badan ka dib marka eeygu qaangaaraan. Tani waa sababta ay muhiim u tahay in eeygu u arko aadanaha inuu yahay madax. Ahaanshaha ilaaliyaha adhiga, waxay had iyo jeer yeelan doontaa dareen ay ku ilaaliso taasna lama soo saari karo lagamana soo saari karo, sikastaba eey u aqbasha bini'aadamka inuu hogaamiye u noqdo ayaa sidoo kale aqbali doona shisheeyaha ay bini aadamku si rasmi ah ugu barto. Waxay sidoo kale u eegi doontaa aadanaha sida kuwa iyagu go'aamada gaara. Uma baahnid eey sidan u weyn oo xoog leh oo ku nool gurigaaga oo wicitaannada oo dhan wada. Adhijirka reer Anatolia wuxuu wali lahaan doonaa gurigiisa iyo hantidiisa, isagoo aan u oggolaan doonin qofna inuu soo galo haddii mulkiiluhu uusan guriga joogin, ilaa uu xiriir joogta ah la yeesho qofka mooyee. Saaxiibada qoyska waa la soo dhaweyn doonaa. Eygan kibirka badan ayaa isagu iskiis dalbanaya, wuuna adkaan karaa oo xukumi karaa haddii uu isu arko inuu yahay hoggaamiye guriga. Markii la tababaro Adhijirka reer Anatolia, natiijooyinka ugu wanaagsan waxaa lagu gaaraa habab tababarro dhiirigelin leh oo leh go'aan, adag, kalsooni, iswaafaq iyo kalgacal leh. Tani uma eey milkiilaha iska aamusan ama milkiilaha kan ma fahmayo dareenka canine . Aad ayey muhiim u tahay in la bilaabo tababarka sida ugu dhaqsaha badan, maxaa yeelay eeyga si buuxda u koray ayaa laga yaabaa inuu aad u xoog badan yahay aadna u weyn yahay in la saxo qofka celceliska ah. Milkiilayaasha aan soo bandhigin dabiici, xoog badan, laakiin xitaa dabacsan, awoodda eyga waxay u arki doonaan eyga inuu yeesho fekerkiisa isla markaana u hoggaansamo amarrada la yaqaan haddii uusan rabin inuu sidaas sameeyo. Xasaasi u ah canaanashada oo u hamuun qaba in la helo kalgacal, noocani waa mid dulqaad leh oo ilaalinaya carruurta qoyska, laakiin si kadis ah ayuu u ridi karaa. Carruurta waa in marwalba la kormeero oo si haboon loo baro. Kalsoonida leh, Adhijirka reer Anatolia uma baahna wax tababar dheeraad ah oo ilaalin ah. Waxay durba leedahay dareen xoog leh oo ilaalin ah kaas oo sii xoogaysan doona sida eygu bislaado. Dareennadani waxay ugu sarrayn doonaan da'da hal sano iyo badh. Guud ahaan waxay la jaan qaadi doonaan xayawaannada kale haddii la baro iyaga markay weli yar yihiin. Waxay noqon karaan kuwo ku xoog badan eeyaha kale waana muhiim in is dhexgal iyaga inta ay weli yar yihiin. Eeyahaani si tartiib tartiib ah ayey u bislaadaan, oo ay gaaraan qaan-gaarnimo buuxda qiyaastii afar jir.
Eeyaha u shaqeyn doona sidii ilaalada adhiga waa inaysan noqon xayawaan gurijoog ah ama waxay ka doorbidayaan qoyska xoolaha ay tahay inay ilaashadaan. Waxay u baahan yihiin in lala dhaqmo iyadoo aadanuhu duurka imaanayo sidaa darteed waa macquul inay helaan daryeel caafimaad xoolaha iyo qurxin kasta oo lagama maarmaan ah, laakiin waa inay noloshooda oo dhan la noolaadaan adhiga oo aan guriga lala soo gelin dadka. Bulsheyntani waa inay dhacdaa inta eeygu ey yahay. Dadka reer Anatolia waxay lugeyn doonaan habeen kasta soohdinta dhulkooda, ka dib waxay heli doonaan meel sare oo ay ku jiifsadaan si ay uga ilaaliyaan eedeymahooda. Dhowrkii saacadoodba mar bay kici doonaan oo waxay ku dhex socon doonaan adhigooda mar kale si loo hubiyo inay dhammaantood nabdoon yihiin. Haddii ay ogaadaan qatar waxay bixin doonaan qolof digniin qoto dheer. Haddii taasi aysan ka baqin hanjabaadda waxay sii qoto dheeri doonaan jilifkooda, iyagoo naftooda ka dhigaya kuwo aad u culus oo u digaya adhiga inay gadaashooda ku soo ururaan. Haddii halistu sii socoto oo ay ku soo dhowaato adhiga Anatoliyanka ayaa weerari doona, laakiin tan marwalba waxaa loo badbaadiyey inay tahay miciinka ugu dambeeya. Isdhexgal hore oo ballaaran, tababarka adeeca iyo hoggaan joogto ah aad ayey muhiim u yihiin markaad yeelaneyso Adhijir Anatoliya ah.
Miisaanka: Ragga 100 - 150 rodol (45 - 68 kg) Dumarka 90 - 130 rodol (41 - 59 kg)
U nuglaanshaha hypothyroidism ama indho-beelka indhaha. Hip dysplasia wuu dhacaa, laakiin uma badna sida kuwa kale ee waaweyn. Waxay u nugul yihiin suuxdinta. Difaaca Anatolia wuxuu ilaaliyaa inta badan waqti dheer si loo horumariyo marka loo eego noocyo kale oo badan sidaa darteed waa inaad kala hadashaa dhakhtarkaaga xoolaha si aad u siiso dhalinyarada Anatolia talaalada dheeraadka ah ee ka dhanka ah Parvo-virus.
Adhijirrada Anatolia laguma talinayo nolosha guryaha dabaqyada ah. Iyagu gudaha waxoogaa kama hawl galaan waxayna ku fiicnaan doonaan ugu yaraan daarad weyn. Noocani waa mid aad uga shakiya shisheeyaha, sidaa darteedna ay lagama maarmaan tahay in la bixiyo deyr amni leh.
Noocani wuxuu u baahan yahay jimicsi badan. Waxay sida ugu fiican u shaqeeyaan markay bilaash ku ordi karaan deyrkooda ku oodan, laakiin weli waxay u baahan yihiin inay sii socdaan socod dheer maalinle ah . Waxay ugu fiican tahay shaqo si ay u sameyso adhi si ay u ilaaliso.
Noocani wuxuu u baahan yahay qurxin yar. Koodhku wuxuu u baahan yahay cadayasho dhammaystiran inta lagu jiro xilliyada daadinta laba jeer-sanadkii. Waad ku baxsan kartaa adiga oo aan fiiro gaar ah lahayn sanadka intiisa kale. Adhijirka reer Anatolia waa mid xilliyeed, daadiya culus.
Adhijirka reer Anatolia wuxuu u dhashay Aasiyada Yar. Waxay ilaalisaa adhiga waxayna u adeegtaa sida weheliyaha adhijir. Dusha sare ee Anatolia, xagaaga waa kuleyl aadna u qalalan jiilaalkuna waa qabow. Eyga Shepherd Dog wuxuu awoodaa inuu ku noolaado banaanka sanadka oo dhan. Qarniyaal awoowayaasha Adhijirka reer Anatolia waxaa loo adeegsan jiray eyda dagaalka ee dagaalka iyo ugaarsiga. Waxaa si gaar ah loogu qiimeeyay dagaalladii guusha ee ay kula dagaallami lahayd yeyda. Dadka Turkiga waxay saari lahaayeen midab cufan si ay qoorta uga ilaaliyaan inay cunaan ugaarsadayaasha weerara eedeymahooda. Sida ido ido ah, waxaa dhib ku hayay daal iyo cimilo xumo midna. Maanta wali waxaa loo isticmaalaa sida eeyaha idaha iyo waliba eeyga ilaaliyaha ah. Adhijirka reer Anatolia wuxuu aad ugu dhow yahay kan Eyga Kangal dadka qaarna xitaa waxay ku dhawaaqaan dhammaan adhijirka Turkiga ah ee loo yaqaan 'Kangal Dog', inay noqdaan hal nooc, Adhijirka reer Anatolia, sikastaba eeyaha runta ah ee loo yaqaan 'Kangal Dogs' ayaa la sheegaa inay yihiin nooc ka duwan eyga adhijirka Turkiga ah Xaaladaha taariikheed ee go'doonsan ee gobolka Sivas-Kangal waxay sababeen horumarinta Eyga Kangal oo ah nooc caan ah oo lagu dhawaaqay eeyga Qaranka ee Turkiga iyo hanti qaran. Eyda runta ah ee loo yaqaan 'Kangal Dogs' waa kuwa ugu horreeya uguna horreeya ee weli shaqeeya adhijirro. Dhoofinta eeyaha Kangal saafi ah ee Turkiga ayaa la xakameeyay oo hadda waa mamnuuc. Naadiga Eyga Kangal ee Mareykanka wuxuu sii wadaa inuu ka shaqeeyo yareynta xaddidaadda soo dejinta. Eeyaha la soo dhoofiyo waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin kuwo aad qiimo ugu leh ku-biirintooda hida-wadaha ee Mareykanka. Adhijirka Anatolia waxaa aqoonsaday xisbiga AKC sanadkii 1995.
Waqtigaan la joogo, waxaa jira in ka badan 3000 oo Adhijirro reer Anatolia ah oo ka diiwaangashan Mareykanka. Anatolia waxaa laga diiwaan gelin karaa Anatolian Shepherd Dog Club of America iyo Anatolian Shepherd International.
'Tani waa Jolly, Adhijirkayaga reer Anatolia ee afar jirka ah. Iyadu waa daacad, aad u cayaar badan, oo weynaata carruurta laakiin waxay jeceshahay inay dhex mushaaxdo sida adhijirrada oo dhami u sameeyaan. In kasta oo cabirkeedu yahay mid aad u jilicsan eeyaha kale iyo dadka laakiin u digtoon shisheeyaha. '
'Tani waa Bastian. Waxaan ka qaaday sawirkan isaga oo jira 4 bilood. Isagu waa Adhijir reer Anatolia ah, waxaanan dhihi lahaa wuxuu astaan ​​u yahay isirkiisa. Waa nin aad u daacad ah, aad u caqli badan, iyo madax adag ! Isagu waa arday si dhakhso leh wax u barta, oo si la yaab leh ayuu ugu xasilan yahay ardaygan yar. Isagu waa mid ka mid ah kuwa ugu eeyo is dhiibta Weligay waan arkay. Isagu maaha cunto-wadayaal wax kasta ha noqotee markaa tababbarku xoogaa wuu adag yahay (laakiin xaqiiqda ah inuu yahay arday dhaqso badan ayaa isku dheelitiraya xaqiiqda xoogaa). Xaqiiqdii isagu waa eey-dad, inkasta oo uu jecel yahay waqtigiisa ciyaareed park eey . '
Eeg tusaalayaal badan oo ah Adhijirka reer Anatoliya
Sawirada Adhijirka Anatolia 1
Sawirada Adhijirka Anatolia 2
3 bilood jir puppy puppy
Ey adhijirro yaryar oo yar yar oo iib ah
adhijireenka australia buluugga ah merle mini
maltese iyo yorkie eyyo isku dhafan
cocker isbaanishka midabada roan beerka